दिनमा चार सयको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने मेसिन सुदूरपश्चिम धनगढीमा, आजैदेखि परीक्षण गर्ने तयारी — sancharkendra.com
१रुकुमपश्चिम घटनामा बेपत्ता अर्का एक युवककाे यस्तो अवस्थामा भेटियाे
२कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारका लागि सरकारले बल्ल गर्यो यस्तो निर्णय, हेर्नुस बिस्तृतमा
३काठमाडौं मेडिकल कलेजका ४ जना स्वास्थ्यकर्मीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टी
४नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघ्यो, आज एकैदिन थप २८८ जनामा संक्रमण पुष्टी
५कर्णालीमा थप २९ जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि, प्रदेश ५ मा ६७८ पुग्याे
६क्वारेन्टाइनमा एकै जनाले २० जनाको खाना खाएपछि हंगामा, यस्ताे रहस्य थाहा पाएपछि माेदी समेत चकित
७डब्ल्युएचओसँग सबै सम्बन्ध तोडेका ट्रम्पलाई चीनले दियो यस्तो संज्ञा
८जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्न सरकारको ताकेता, नतिरे के हुन्छ ?
९बैतडीको क्वारेन्टाइनमा २२ वर्षीया युवतीको मृत्यु
१०लकडाउनको ढाँचा फेर्ने ओली सरकारको तयारी
११क’र्फ्यूबीच अमेरिकाका ७० शहरमा प्रदर्शन, ट्रम्पले दिए यस्तो कडा चेतावनी
१२इजरायली प्रधानमन्त्रीकाे कार्यालयमा कार्यरत एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
दिनमा चार सयको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने मेसिन सुदूरपश्चिम धनगढीमा, आजैदेखि परीक्षण गर्ने तयारी
काठमाडौँ। तीन घण्टामा ९६ जना र दिनमा चार सयको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने आरटीपीसीआर मेसिन धनगढी पुगेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रहेको मेसिनलाई बुधबार बिहान नेपाली सेनाको स्काइट्रकमा राखेर धनगढी ल्याइएको हो ।
उक्त मेशिन पशुपन्छी रोग अन्वेशण प्रयोगशाला धनगढीमा जडान गरिनेछ । प्रयोगशालाका प्रमुख सहसचिव डा. डिकरदेव भट्टले कोभिड–१९ को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मेसिन जडान गरेर बुधबारदेखि नै परीक्षण थालिने बताए ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले आरटीपीसीआर मेसिन जडान भएपछि धेरै सहज हुने विश्वास गरे ।
सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या ४ जना पुगेपछि सरकारले त्यहाँ र्यापिड टेस्ट परीक्षण शुरू गरिसकेको छ । अब यो नयाँ आरटीपीसीआर मेशिनले परीक्षण शुरू गरेपछि त्यहाँ परीक्षण तीब्र हुने र त्यसबाट संक्रमति भए/नभएको पहिचान गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले सुदूरपश्चिममा संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको र त्यहाँ परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर थप मेसिन लगिएको जानकारी दिए ।
त्यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर १० का अध्यक्ष रविन्द्र शाहीको खोजी भईरहेको जनाएको छ। शाहीले प्रयोग गर्दै आएको भारतीय गाडी, दुई थान हतियार, ८२ हजार नगद र ६ वटा एटिएम मंगलवार सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेसंगै वडा अध्यक्षको खोजी भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक रविन्द्र पौडेलले बताए। ‘लकडाउनको अवधीमा फरक जिल्लामा आएर हतियार बोक्ने अधिकार कसैसंग छैन्।
अहिलेको समयमा गाडी र हतियार दुबै कानुनको नजरमा अबैध नै हो। अहिले गाडी मालिकको खोजी गरिरहेका छौ।’ उनेले दिनेश खवरलाई भने। वडा अध्यक्ष शाही यसअघि पनि जुवा खेल्ने क्रममा पक्राउ कैलालीमा पक्राउ परेका थिए। वडा अध्यक्ष शाहीका समर्थकहरुले इजाजतपत्र फेसवुकमा सार्बजनिक गर्दै वैध हतियार भएको दावी गरेका छन्। तर एयर गनको भने इजाजतपत्र सार्वजनिक गरिएको छैन्।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ को बिचमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गमा वडा अध्यक्ष शाहीले प्रयोग गर्ने भारतीय नम्बर डिएल–३ सिसिआर ३९९७ को टोयटा गाडी, एक थान राईफल, त्यसमा प्रयोग हुने १४ गोली, एक थान एयरगन र त्यसमा प्रयोग हुने एक सय ९६ छर्रा बरामद गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३५ गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक बिरबहादुर साहुले अहिलेको समयमा इजाजतपत्र हतियार भए पनि वैध भन्न नमिल्ले बताए।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले पनि लकडाउनमा जिल्ला नै फेरेर हतियार बोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। उनले भने, ‘भारतीय नम्वरको गाडी सञ्चालनमै रोक लगाएका छौँ। त्यसैमा अहिले सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह जान नपाउने भनेको छ। यस्तो बेला अर्को जिल्लामा आएर हतियार बोक्ने अधिकार कसैको छैन्। अहिले इजाजतपत्र भएपनि वैध हतियार भन्न मिल्दैन्।’